पूर्वी नेपालमा भारी वर्षाको सम्भावना
कात्तिक ३, काठमाडौं । केही दिनदेखि जारी भईरहेको भारी वर्षा अझै केही दिन कायम रहने भएको छ । शुक्रबारसम्म देशका विभिन्न स्थानमा पानी पर्ने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । आज पूर्वी नेपालमा भारी वर्षाको सम्भावना रहने महाशाखले बताएको छ । आइतबारदेखि पश्चिम नेपालमा भारी वर्षा भईरहेको थियो भने आज...
राजेश हमालको हातबाट टीका थाप्न पुगे निर्माता सिंह
समाचार स्रोत:शुदर्शन सिंह असोज ३१, काठमाडौँ । नेपाली चलचित्र क्षेत्रका महानायकका रुपमा चिरपरिचित राजेश हमालको हातबाट टिका लगाउन र आशिर्वाद ग्रहण गर्न युवा ब्यवसायी, सामाजिक अभियान्ता तथा चलचित्र निर्माता अक्कल सिंह उनको निवास लैनचौरस्थित कपुरधारामा पुगेका थिए । टिकाको तेस्रो दिन अर्थ...
जङ्गी अड्डाको निरीक्षण गर्दे रक्षामन्त्री रिजाल
असोज ३१, काठमाडौं । रक्षामन्त्री डा. मीनेन्द्र रिजालले आज जंगी अड्डाको निरीक्षण गरेका छन् । राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रवर्द्धन तथा नेपाली सेनाको क्षमता अभिवृद्धिका लागि प्रयत्न गर्ने रक्षामन्त्री रिजालले बताए । साथै सेनाले प्राथमिकतामा राखेका कार्यहरुको कार्यान्वयनमा श्रोतको सुनिश्चितताका लागि...
यसरी मनाइन्छ भक्तपुरको तलेजुको वाहन सेतो घोडाको जात्रा
असोज ३०, भक्तपुर । धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्वको रुपमा पुजिने भक्तपुरको तलेजुको वाहनका सेतो घोडाको जात्रा गए राति सम्पन्न भएको छ । यो जात्रा प्रत्येक वर्ष बडादशैं र एकादशीको मध्यरातको समयमा आयोजना गरिने परम्परा चलि आएको छ । जात्रामा तलेजु भवानीलाई तलेजुका मूल नाइके, आचाजु, जोशी, राजोपाध्य...
असोज २९, काठमाडौं । आज नेपालीहरूको महान् चाड बडादशैँको मुख्य दिन । दशैँ अर्थात् मुख्य दिन आफ्ना मान्यजनबाट टीका तथा जमरा लगाई हर्षोल्लासका साथ विजयादशमी पर्व मनाइँदैछ । आज बिहान ८ः१९ बजे देवी विसर्जन र बिहान १०ः०२ बजे टीका लगाउनका लागि शुभ रहेको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका अध्यक्ष प्...
असोज २७, काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी शक्तिपीठमा पूजा गर्न आज काभ्रे जाने तयारीमा हुनुहुन्छ । पलाञ्चोक भगवतीमा पूजा गर्न काभ्रे जान लाग्नु भएको हो । उनी हेलिकप्टर चढेर काभ्रे जान लागेको सुरक्षा स्रोतले जनाएको छ । राष्ट्रपतिको आगमनलाई मध्यनजर गरी काभ्रेको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएक...
असोज २३, नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्वमन्त्री पार्वत गुरुङ बाढी–पहिरो पीडितको पीडामा खाद्यन्नसहित दोलखाको लापिलाङ पुग्नुभएको छ । दोलखाको बिकाश र नागरिकको सेवामा सदैव क्रियाशील पूर्वमन्त्री गुरुङ लापिलाङस्थित रानीबन पहिरो पीडितलाई मलम लगाउन खाद्यन्न लिएर पुग्नुभएको हो ।...
असाेज २२, काठमाडौं । नेकपा एमाले रामेछाप नगर-काठमाडौं सम्पर्क मञ्च अन्तर्गतकाे देउराली -काठमाडौं वडा सम्पर्क मञ्चकाे संयाेजकमा सर्वसम्मत तिलकराज बुढाथोकी चयन भएकाे छ। रामेछाप नगर-काठमाडौं सम्पर्क मञ्च अन्तर्गत देउराली -काठमाडौं सम्पर्क मञ्च द्वारा आयाेजित वडा सम्पर्क मञ्च गठन ,दशैं तिहा...
अनसन बस्ने डा. केसीको चेतावनी
असोज २१, काठमाडौं । डा. गोविन्द केसीले आफुले राखेको माग पूरा नभए अनसन बस्ने चेतावनी दिएका छन् । राज्यको नीति निर्माणमा शैक्षिक तथा मेडिकल माफियाहरूको हस्तक्षेप भएको भन्दै सत्याग्रह बस्ने चेतावनी दिएका हुन् । चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शैक्षिक र...
जुकरबर्गले गुमाए ६ अर्ब भन्दा बढी डलर
असोज १९, फेसबुकका सिइओ मार्क जुकरबर्गले ६ अर्ब भन्दा बढी डलर गुमाएका छन् । सोमबार राति संसारभरिका सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले फेसबुक चलाउन पाएनन् । फेसबुकसँगै अरु सामाजिक सञ्जाल जस्तै इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप, मेसेन्जर र ओकुलसले काम गर्न छाडेका थिए । यो क्रम लगभग छ घन्टा चल्यो । झन्डै ६ घन्...
ज्येष्ठ नागरिक दिवसमा ६० वर्ष माथिकालाई एनटिसीको सिम निःशुल्क दिने
असोज १५, काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवस आज नेपालमा पनि मनाइँदै छ । यही दिवसको अवसर पारेर नेपाल टेलिकमले ६० वर्ष माथि पुगेका ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई निःशुल्क सिमकाड दिने भएको छ । निःशुल्क सिमकार्ड यही असोज २५ गतेसम्म मात्र पाइने छ । यो सिममा १० रुपैयाँ मात्र ब्यालेन्स हुनेछ । ४० मिनेट...
असोज १३, काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तराईमा मनाइने जितिया पर्वको अवसरमा देश विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई शुभकामना दिनुभएको छ । शुभकामना सन्देश जारी गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले भौगोलिक‚सामाजिक र सांस्कृतिक विविधतायुक्त मुलुकमा मनाइने यस्ता पर्वहरूले परिवार र समुदायमा आपस...
गाेठगाउँ सराेकार समाजले दश‌ैकाे सन्दर्भ पारी तेस्राे वार्षिक साधारणसभाकाे आयाेजना गर्दै
असाेज १३, काठमाडौं । गाेठगाउँ सराेकार समाजले दशैकाे सन्दर्भ पारी तेस्राे वार्षिक साधारणसभा तथा बडा दशैकाे शुभकामना आदान-प्रदान कार्यक्रमको आयाेजना असाेज १६ गते शनिबार बिहान १०.०० मेगा फुड क्याफे सामाकाेसिमा गर्ने भएकाे छ। सराेकार समाजले गाेठगाउँका वडा कार्यालय ,स्वास्थ्य चाैकी ,तिनै वटा विद्यालयह...
लागूऔषधका अभियुक्त आइसोलेशन सेन्टरबाट फरार
असोज १२, काठमाडौं । आइसोलेशन सेन्टरबाट लागूऔषधका अभियुक्त फरार भएका छन् । महानगरीय प्रहरी वृत थानकोटबाट पक्राउ परेका १९ वर्षीय राहुल तामाङ आज कीर्तिपुरको कोभिड आइसोलेशन सेन्टरबाट फरार भएका हुन् । कीर्तिपुरका डिएसपी ठाकुर पोखरेलले भने, ‘शौचालय गएका अभियुक्त फरार भएका छन ्। हामीले उनको ख...
चिरञ्जीवी डेरीकाे शुद्ध घ्यू अब Martis Online चाबहिलमा पनि उपलब्ध
असाेज ११, काठमाडौं। चिरञ्जीवी डेरी उद्योग मन्थली न.पा.१ रामेछापमा उत्पादित शुद्ध घ्यू , पाेष्टकारी ,छुर्पी लगाएतका सामानहरू चारूमती स्वावलम्बी इन्भेष्टमेन्ट ग्रुप प्रा.ली. द्वारा संचालित Martis Online चाबहिलमा पनि उपलब्ध हुँदै आएकाे Martis Online का मार्केटिङ इन्चार्ज माेहन श्रेष्ठले विचार वाटिकालाई...
आजदेखि दशैंमा घर जाने बसको टिकट खुल्यो
असोज ११, काठमाडौं । दशैंमा घर जानेहरुका लागि आजबाट टिकट बुकिङ खुला भएको छ । दशैंमा घर जाने व्यक्तिहरु आज बिहानैदेखि टिकट लिन गोंगबुस्थित नयाँ बसपार्क पुगिसकेका छन् । उनीहरुलाई दुरी कायम गरी लाइनमा राखेर टिकट बिक्री गरिएको देखिएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले गत बिहीबार यातायात व्यवसायी, उपभोक्ता...
आखिर के भएको थियो त आज नारायणहिटी भित्र ?
असोज ८, काठमाडौं । नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमा प्रदर्शनमा राखिएको पूर्वराजाको श्रीपेच लगाउने प्रयास गरेका छन् । आज अवलकोनका लागि संग्रहालय पुगेका मुसिकोट नगरपालिका–११ का २५ वर्षीय खेमबहादुर घर्तीले श्रीपेच लगाउने प्रयास गरेको नारायणहिटी दरबार संग्रहालय व्यवस्थापन समितिका कार्यकारी निर्देशक...
अष्ट्रेलियामा ५.९ म्याग्नेच्युडको भूकम्पको धक्का
असोज ६, काठमाडौं । अष्ट्रेलियाको भिक्टोरियामा ५.९ म्याग्नेच्युडको भूकम्प गएको छ । स्थानीय समयअनुसार बिहान ९ बजेको समयमा भूकम्प गएको अष्ट्रेलियाका सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् । बिहान ५.९ म्याग्नेच्युडको भूकम्प गएको र भिक्टोरियाका साथै सिड्नी, क्यानबेरा र तास्मानियासम्म भूकम्पको धक्का महसुस भएको थिय...
पहिरो पीडितद्धारा बुटवलका मेयर सुवेदीमाथि हातपात
असोज ४, बुटवल ज्योतिनगरका पहिरो पीडितले बुटवल उपमहानगरका मेयर शिवराज सुवेदीमाथि मुक्का प्रहार गरेका छन् । गत भदौ १३ र १४ गते अविरल वर्षासँगै खसेको पहिरोले ज्योतिनगरका १० घर पुरिएका थिए भने ५० बढी घर उच्च जोखिममा परेका थिए । आज उक्त पहिरो प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षण गर्न गएका मेयर सुवेदीमाथि पहिरो...
असोज ४, काठमाडौं । दशैंका लागि आजदेखि नयाँ नोट साट्न पाइने भएको छ । कोरोना भाइरसबाट बच्न जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाउँदै सर्वसाधरणका लागि नयाँ नोट साट्ने नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यवस्था मिलाएको हो । राष्ट्र बैंकबाट मात्रै नभएर अन्य बैंकहरुले आफैंले पनि आफ्ना ग्राहकहरुलाई नयाँ नोट सटहीको व्यवस्था गर्...